I-13 Iifoto zezembali zoshishino lwabantu - i-Geofumadas
I-13 Iifoto zezembali zoomashishini boshishino
NgoDisemba, 2015 Zobunjineli, ezintsha, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Unyaka we-2015 usuphelile. Ukubhiyozela, sikulethela ezimbalwa iifoto zembali ezikhumbuza ukuba ixesha alidluli.
I-LZ 129 iHindenburg, i-Zeppelin-uhlobo lwe-airship, isatshatyalaliswa ngumlilo xa i-6 1937 e-36 ifika eNew Jersey. Ingozi yabangela ukufa kwabantu base-XNUMX (malunga nesithathu sabantu ebhodini). Kwaye yafunyanwa ngokubanzi ngamajelo exesha kwaye yayithetha ukuphela kwe-blimps njengeendlela zothutho.
I-Niagara Falls xa iinjineli zomkhosi "zitshixe isitshixo" sokususa amatye e-1969.
I-Camp Nou, inkundla ye FC FC, ngexesha lokwakha kwayo. 1954
Abantu abakwipikiniki kwindlela ehamba phambili ngexesha leengxaki zeoli kwi-1973.
Ukuhanjiswa kweposi kwi-1914. Kwakubandakanywa izikhonkco kunye nogaxekile.
Umbono wekamva kwi-1930. I-Skype inomathotholo ukuya kwinqeni ifakiwe.
Ku-1905 kwakukho imoto yamagesi. Apha ungabona enye ityala. Okuyinkimbinkimbi njengoko ishishini likaTesla langoku lihlala linokwenzeka, ngaphandle kokudala umonakalo omkhulu kummandla.
Oku kukukumemori, umhla we-Star Wars, i-1977.
Ukwakhiwa kwesinye sezixeko zokuqala ezicwangcisiweyo kwihlabathi. Brasilia, 1960.
Ukwakhiwa kwee-twins (iWorld Trade Centre) eNew York, 1969.
UBill kunye noHillary Clinton xa bebafundi kwi-1972. Apha akukho buqili, akukho nto ngenxa yokuba isithunzi sinokudumisa ukuba ngokokuqala ngqa iUnited States iya kuba nomongameli wayo wokuqala wowesifazane.
Xa ama-cinema ekuqhubela phambili ayesecaleni. South Bend, e-Indiana, i-1950
Imizi yeselula yexesha elizayo ngokwendlela epapashwe ngayo kwimagazini kaSeptemba 1934 ye- "Ntsuku zonke yeNzululwazi kunye noomatshini."
Post edlulileyo«Edlulileyo BIM - mkhuba lakho CAD
Post Next QGIS 3.0 - Njani, nini kunye nantoni na; kuthethaOkulandelayo "